Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica: Ọmụmụ ihe gbasara Ọzụzụ Ọhụrụ Pụrụ Iche
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya, Hon. Edmund Bartlett (n'aka ekpe) kwụsịtụrụ nzukọ ya na onye isi oche nke International Sales, American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI), Ed Kastli, maka foto ngwa ngwa. Ememe ahụ bụ nzukọ na Madrid, Spain n'isi ụtụtụ taa, iji kparịta mbipụta nke ọmụmụ ihe gbasara ọzụzụ na Jamaica. Emere mkpebi a n'ihi na, ebe ọ bụ na mmekorita ya na Jamaica Center of Tourism Innovation (JCTI), malitere afọ anọ gara aga, ihe karịrị 8,000 ndị ọkachamara njem nlegharị anya Jamaica enwetala akwụkwọ ikike.
Ekwuwapụtara nke a n'oge nzukọ na Madrid na mbụ taa na Ed Kastli, osote onye isi oche nke ire ahịa mba ụwa na AHLEI. N'ịkọwa na ọrụ 1 nde ka na-emeghe na ahịa United States maka ndị ọrụ njem nlegharị anya, Minista Bartlett kwusiri ike na mmekorita a ka bara uru ka Jamaica na-aga n'ihu na-elekwasị anya na mmepe ego mmadụ n'ofe mpaghara njem.
"AHLEI bipụtara ntuziaka na ụkpụrụ COVID-19 na Machị 2020 maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nke e kenyere anyị na Ministry of Tourism maka ịtụgharị na mmemme ọzụzụ iji hụ na nchekwa na nchekwa nke ndị ọrụ njem na ndị ọbịa anyị," ka ọ kọwara.
JCTI bụ ngalaba nke ego nkwalite njem nlegharị anya (TEF), otu ọha na eze Ozi nke Njegharị. JCTI na-arụ ọrụ ikwado mmepe nke isi obodo Jamaica bara uru na ịkwado ihe ọhụrụ n'ime ngalaba njem nlegharị anya.
“ Njem nlegharị anya bụ isi Mmepe obodo Jamaica. Otu ebumnuche bụ isi nke mmemme na mmemme nke Ministry of Tourism na òtù ọha anyị bụ imepụta ọrụ ga-eme ka ndụ Jamaica dịkwuo mma, "Minista Bartlett kwuru.